यिनै हुन बिद्यार्थीलाई कुटेर हात भाच्ने शिक्षिका ? यिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? कमेन्ट गर्नुहोला — ''समर्पण मिडिया''
यिनै हुन बिद्यार्थीलाई कुटेर हात भाच्ने शिक्षिका ? यिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? कमेन्ट गर्नुहोला
काठमाडाैं- ५ जना विद्यार्थीको हात भाँचिदिएकी रोल्पाको रुम्टीगढी गाउँपालिका ८ भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनलाई प्रहरीले ‘अभद्र व्यवहार’ सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ । सोमबार विद्यालय छुट्टी भएपछि शिक्षिका पुनलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीबाट प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चौलागाईंको नेतृत्वमा गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । शिक्षिका पुनले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरी हात नै भाँचिदिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख (डिएसपी) दीपक खड्काले शिक्षिका पुनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
शिक्षिका लक्ष्मी पुनले विद्यालय ढिलो आएको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई लाठ्ठी प्रयोग गरी कुटेको घाइते बालिका भिमकुमारी बाँठाले बताएकी छन् । कुटाईबाट घाइते हुने अन्य विद्यार्थीहरुमा कक्षा एकका प्रेम पुन, सहित सन्तोष बुढामगर लगाएतका रहेका छन् । कुटपिटबाट घाईते भएका रोल्पाका १४ जना बिद्यार्थीहरु उपचारपछि घर फर्किएका छन् । आईतबार उपचारका लागि तुलसीपुर आएका उनीहरु उपचारपछि सोमबार घर फर्किएका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार सोमबार पक्राउ गरेर ईप्रका होलेरीमा राखिएकी शिक्षिका पुनलाई मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा ल्याइँदैछ । मंगलबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामार्फत् अनुसन्धानका लागि म्याद थप हुन सक्ने बताईएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चौलागाईंले विद्यार्थी कुटपिट गर्ने शिक्षिकालाई म्याद थपका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा पठाइएको बताएका छन्
शिक्षिका पुनको कुटाईबाट १४ जना विद्यार्थी घाईते भएका थिए । घाइते हुनेमा कक्षा १ मा पढ्ने देखि ८ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी छन् । घाइते मध्य भिमकुमारी बाँठा, निर्मला पुन, गौरी घर्ती, शान्ता नेपाली र बिमला रोकाको हातमा चोठ लागे पछि तुलसीपुर स्थित सहारा पोलिकिल्निकमा पलाष्टर गरिएको छ । उपचारमा संलग्न डा. घनश्याम शर्माका अनुसार घाइते बालिकाको हात जोर्नी, अनुहार लगाएतमा समस्या देखीएको छ । जोर्नीमा दबाब देखिएपनि केहि दिनपछि सुधार आउन सक्ने डाक्टर शर्माले जानकारी दिए ।